Marka aanad awoodin inaad wargelina hawlahaaga ka samayso bogga intarnat-ka
Bil kastaba waa inaad dhiibtaa wargelinta hawlahaaga taas oo aad ku samaynayso wargelinta bishi hore hawlaheedi. Adigu waa inaad dhiibtaa wargelinta hawlahaaga ugu horeyn 1-da iyo ugu dambeyn 14-ka bil kastaba. Sida ugu fudud inaad samayso wargelinta hawlahaaga waa dhanka bogayaga intarnatka ama Aab-ka Bogagayga. Si tani loo samayn karo waa inaad ku gashaa aqoonsiga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka).
Haddii aanad lahayn aqoonsi elaktaroonig ah waxaad soo dejisan kartaa oo daabacan kartaa foomka Aktivitetsrapport. U dhiib foomkan xafiiska shaqada ee kuugu dhow ama boosta ugu dir xafiiskan. Ma laguu oggola inaad foomkan ku soo dirto dhanka ii-maylka.